सुरक्षाको कडा घेरामा रहेको कास्की अदालतको दुई इजलास कक्ष कसले तोडफोड गर्यो ? - इ-दैनिकी
सुरक्षाको कडा घेरामा रहेको कास्की अदालतको दुई इजलास कक्ष कसले तोडफोड गर्यो ?
चैत्र ९, २०७८ १४;४९ मा प्रकाशित
पोखरा — जिल्ला अदालत कास्कीका दुई वटा इजलास कक्षमा मंगलबार राति तोडफोड भएको छ । अदालतको एक नम्बर र छ नम्बर इजलास कक्षमा तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको हो । एक नम्बर इजलासमा प्रमुख न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई र छ नम्बर इजलासमा देवप्रसाद योगीले मुद्दा हेर्दै आएका थिए ।
एक नम्बर इजलास कक्षको ढोका मात्रै फोरिए पनि छ नम्बर इजलास कक्षमा भित्र रहेको दराज पनि फुटाइएको छ । दराजमा रहेका महत्त्वपूर्ण प्रमाण र मिसिलहरू चोरी भएको आशंका गरिएको छ । बुधबार बिहान सरसफाइ गर्न आएकी कर्मचारीले इजलास कक्षका ढोका फुटेको देखेपछि माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई खबर गरेकी थिइन् ।
चौबीसै घण्टा अदालतको मुख्य प्रवेशद्वारमा प्रहरी सुरक्षा हुन्छ । साथै अदालतको अगाडि नै वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम रहेको छ । यस्तो कडा सुरक्षा घेराका बीच अदालतमा पसेर दराज फुटाइनुलाई शंकास्पद घटनाका रूपमा लिइएको छ । कोठाभित्र ढोका फुटाउन प्रयोग गरिएको फलामको रड पनि भेटिएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।